gif နဲ့ pdf — MYSTERY ZILLION
gif နဲ့ pdf
July 2008 edited July 2009 in Other
ပိန်းတယ်ပဲပြောလိုက်ပါတော့:106::106: ကျွန်တော် GIF ပုံတွေမလုပ်တတ်လို့ ကိုကို မမတို့ သင်ပေးကြပါဗျာ။ ပြီးတော့ adobe reader နဲ့ဖတ်ရတဲ့ pdf file တွေလဲမလုပ်တတ်ဘူး။:D:D သိတဲ့သူများပြောပြပေးကြပါ။ ကူညီကြပါ:8::8:။ post အဟောင်းတွေရှိရင်လဲ link လေးတွေပြောပြကြပါ။
gif ပုံလုပ်ချင်တာများ လွယ်လို့။ လုပ်ချင်တဲ့ ပုံကို right click ထောက်။ open as ကနေ paint နဲ့ဖွင့်။ ပြီးရင် save as မှာ .gif နဲ့ save ။ ဟုတ်ဘူးလား။
စတာပါ။ ကိုကြယ်လေး လုပ်ချင်တာ animation လုပ်ချင်တာ ထင်တယ်။ animation လုပ်ချင်ရင် ဆော့၀ဲလ်တွေ ရှိတယ်။ photoshop နဲ့လည်းလုပ်လို့ ရတယ်။ flash နဲ့လည်း လုပ်လို့ရတယ်။
.pdf ကတော့ ဆော့၀ဲတွေရှိတယ်။ လုပ်ချင်ရင်။ ကို exiter ကြီးဆီကတောင်း။ လိုချင်တယ်ဆိုရင်။
ဟဲဟဲ မော်မော်ကြီးဆီကို ပို့ပေးလိုက်ပြီ။
[FONT=Arial, sans-serif]Hello guys, I need to convertaGIF image format into PDF. Pls help me. :106:[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Hi Jhon I have been using Magic PDF software and it works pretty well to convert GIF image format into PDF. You can check it out at. [/FONT][FONT=Arial, sans-serif]www.magic-PDF.com[/FONT][FONT=Arial, sans-serif] Haveanice day! Jhon[/FONT]